မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် လူငယ် ကြယ်ပွင့် ကို ခေါ်ယူဖို့ ချယ်လ်ဆီး အသင်း အား တိုက်တွန်း ပြောဆိုလိုက်တဲ့ #ဆောင်းနက်စ် - SPORTS MYANMAR
ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဒီနှစ် ဘောလုံး ရာသီ အတွင်း ကြုံတွေ့ နေရတဲ့ အခက်အခဲ ၊ ပြဿနာ များစွာ ရှိနေရာ ၊ ပွဲထွက် ဂိုးသမား အတွက် ပုံမှန် လက်စွမ်း ပြနိုင်မယ့် ဂိုးသမား တသမတ်တည်း ထားရှိဖို့ အတွက် ဖရန့် လမ်းပတ် ရဲ့ လက်ရှိ ပထမ ဂိုးသမား ဖြစ်သူ ကီပါ အပေါ် အားမရနေမှု ကလည်း ရှှိနေပြန်ပါတယ် ။
အစောပိုင်း မှာတော့ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ လာမယ့် နွေရာသီ အဝယ်စာရင်း မှာ ဂိုးသမား နေရာ မပါပေမယ့် ၊ နောက်ဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ် ၄ပွဲဆက်တိုက် ပွဲထွက်ခွင့် ကို အရန် ဂိုးသမား ဝီလီ ကာဘယ်လာရို ကို ပေးထားခဲ့တာကြောင့် ချယ်လ်ဆီး တို့ လာမယ့် နွေရာသီ မှာ ဂိုးသမား နေရာ အတွက်ပါ စျေးဝယ် ထွက်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
နောက်ပိုင်း ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ကောလဟလ တွေ အရတော့ အက်သလက်တီကို ဂိုးသမား ဂျန်အိုဘလက် ဟာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ ဦးစားပေး ပစ်မှတ် ဂိုးသမား ဖြစ်လာတယ် လို့ သိရပြီး ၊ ဒီရာသီ ရှက်ဖီးလ် ယူနိုက်တက် အသင်း မှာ အငှား ကစားရင်း အထူး လက်စွမ်း ပြနေတဲ့ မန်ယူနိုက်တက် အကယ်ဒမီ ကြယ်ပွင့် ဂိုးသမား ဒင်း ဟန်ဒါဆင် ၊ ဘန်လေ ဂိုးသမား နစ်ပုပ် တို့ဟာလည်း ချယ်လ်ဆီး အသင်း မှ စိတ်ဝင်စား နေတဲ့ ဂိုးသမား တွေ အဖြစ် သတင်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါသေးတယ် ။
လီဗာပူး နည်းပြဟောင်း ဖြစ်တဲ့ ဂရေမီ ဆောင်းနက်စ် ကတော့ ချယ်လ်ဆီး အသင်း အနေနဲ့ ဒီဂီယာ ရှိနေတာကြောင့် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် မှာ ပွဲထွက်ခွင့် အတွက် အာမခံချက် မရှိတဲ့ လူငယ် ဂိုးသမား ဒင်းဟန်ဒါဆင် ကို ခေါ်ယူဖို့ အတွက် ကြိုးစားသင့်ကြောင်း Sky Sports ရဲ့ အစီအစဉ် တခု မှာ အကြံပြု ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ် ။
ဆောင်းနက်စ် က ” ကျွန်တော် ဟာ ဒီရာသီ ရှက်ဖီးလ် ယူနိုက်တက် အသင်း မှာ အထူး လက်စွမ်း ပြသနေတဲ့ ဒင်းဟန်ဒါဆင် ရဲ့ ပရိသတ် တယောက်ပါ ။ သူဟာ ဒီရာသီ အစောပိုင်း လီဗာပူး နဲ့ ပွဲမှာ အမှား တကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့ရာကနေ ဂိုးပေးခဲ့ရတာကို ကျွန်တော် အမှတ်ရနေတုန်းပါ ။ အဲဒီ ပွဲပြီးနောက် သူဟာ မန်နေဂျာ ရဲ့ မျက်နှာသာ ပေးခြင်း ကို မခံရတော့ပေမယ့် ဒီ အမှား ကနေ သူ သင်ယူ လေ့လာနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ”
” သူ့ကို ကြည့်ရတာ အရည်အချင်း ပိုပြီး ပြည့်ဝလာတဲ့ ဂိုးသမားကောင်း ဖြစ်ပုံပေါ်လာပါပြီ ။ ဒီဂီယာ ဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ရဲ့ လစာ အကောင်းဆုံး ကစားသမား တွေထဲက တယောက် ဖြစ်လိမ့်မယ် လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီတော့ ခင်ဗျား အနေနဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကို ပြန်ပြီး ဒီဂီယာ လို လစာမရမယ့် အပြင် ပွဲထွက် ဂိုးသမား နေရာ အတွက်ပါ အာမခံချက် မရှိဘူး ဆိုတဲ့ အဖြစ်မျိုး ခံမှာလား ? ”
” ဟန်ဒါဆင် ကို ခေါ်မယ့် အသင်း တွေရော မရှိနိုင်ဘူးလား ? ခင်ဗျား တို့ အနေနဲ့ လက်ရှိ ချယ်လ်ဆီး အသင်း မှာ ကြံုတွေ့ နေရတဲ့ အနေအထား နဲ့ ဆိုရင် သူတို့ဟာ ဟန်ဒါဆင် ကို ခေါ်ဖို့ မျက်စောင်းထိုး လာနိုင်ပါတယ် ။ သူ့ကို ပွဲထွက် ဂိုးသမား နေရာ ပေးမှာလား ဆိုတာ အိုလေဂန်နာ ဆိုးလ်ရှား ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် နဲ့ပဲ သက်ဆိုင်ပါတယ် ။ တကယ်လည်း ကြီးမားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြစ်လာမှာပါ ။ ” လို့ ဆိုပါတယ် ။
တဖက်မှာလည်း ချယ်လ်ဆီး ကွင်းလယ်လူဟောင်း ခရိတ် ဘာလီ က လက်ရှိ အချိန် မှာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း နည်းပြ ဖရန့် လမ်းပတ် အနေနဲ့ ကာဘယ်လာရို ခေါင်းမာမာ နဲ့ ဆက်သုံးနေမယ့် အစား ၊ ကီပါ ကို အခွင့်အရေး ပေးဖို့သင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် ။
ဘာလီ က ” လက်ရှိ မှာ စိတ်ပူစရာ အနေအထား က လမ်းပတ် ဟာ ကီပါ ကို အရန်ခုံ ပို့မြဲ ပို့ခဲ့ပြီး ၊ ကာဘယ်လာရို ကိုပဲ ဆက်ပြီး အသုံးပြုနေခဲ့တာပါ ။ သူ ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်လုပ်နေတော့မှာလား ? သူ ကီပါ ကို မကြိုက်ဘူး ဆိုတာ ကျွန်တော် တို့ သိထားပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကီပါ ဟာ ပိုကောင်းတဲ့ ဂိုးသမားပါ ။ ဒီလို ဆက်လုပ်နေရင်တော့ ဖရန့် အတွက် မေးခွန်း တွေ ပိုများ လာနိုင်ပါတယ် ။ ”
” နောက်ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့် ရဖို့ ကြိုးစားနေချိန် မှာ ကီပါ နဲ့ မတင်မကျ ဖြစ်နေခဲ့တယ် ၊ အဲ့ဒီတော့ ကာဘယ်လာရို ကို အသုံးပြုတာ က ဖရန့် အတွက် ပိုကောင်းတဲ့ ရွေးချယ်မှုလား ? ကျွန်တော် ကတော့ ကီပါ ဟာ အကောင်းဆုံး လက်စွမ်း ကို ရနေတယ် လို့ မဆိုလိုချင်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ဝီလီ ကာဘယ်လာရို ဟာ အရန် ဂိုးသမား တယောက်ပါ ။ ဖလား ပွဲတွေမှာလောက်ပဲ သုံးသင့်တဲ့ ဂိုးသမားပါ ။ ” လို့ သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ် ။